Ukubuyekezwa kwePanic Fest 2021: Amapompo weGazi Elisha Elingena Kuhlobo LweVampire Romance - iHorror
Ikhaya Ama-Horror SubgenresAmahlaya Horror Ukubuyekezwa kwePanic Fest 2021: Amapompo weGazi Elisha Elingena Kuhlobo LweVampire Romance
Amahlaya HorrorIzindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoAma-movie ama-HorrorAma-Horror SubgenresUkubuyekezwa kwe-MovieAma-movie
Ukubuyekezwa kwePanic Fest 2021: Amapompo weGazi Elisha Elingena Kuhlobo LweVampire Romance
by UJacob Davison April 13, 2021
ebhalwe ngu UJacob Davison April 13, 2021
Ngabe kukhona noma yisiphi isidalwa esifana nohlobo olwesabekayo kunama-vampire? Ziye zavezwa kusuka ezinganekwaneni zasendulo nasezinganekwaneni eziya kuma-franchise ama-romance ezigidi eziningi namabhokisi okusanhlamvu. Ngezindlela eziningi ezahlukahlukene i-vampire fiction evezwe futhi yakhiqizwa eminyakeni edlule kuvame ukubuza lo mbuzo: ayini ama-vampire ngempela njengo?
U-Olivia Romo (Dennice Cisneros) ungumlobi wezothando we-vampire phansi kwenhlanhla yakhe emsebenzini wakhe nasempilweni. Ukuchitha isikhathi sakhe eyedwa egumbini lomndeni eLake Tahoe kumshiye ngunina ongasekho futhi ethola nezincwadi ezenele zokwenqaba embhalweni wakhe wakamuva we-fang-fiction ukuthi angagcwalisa idilowa ngawo. Konke lokhu ngenkathi ebizwa ephindelela ngocingo ngudadewabo njengoba esebenzisa uKhisimusi eyedwa. Bese kuthi ngobunye ubusuku obuhle, ezwe ukuxokozela ngaphandle bese ethola ilulwane elilimele. Ukuyifaka ebhokisini lamakhadibhodi, unquma ukusiza isilwane sasendle ukuba siphulukise egalaji lakhe, kodwa wathola ukuthi sekwephuze kakhulu ukuthi umngani wakhe omusha wasebusuku uyivampire egama linguLuka (Nico Bellamy) nokuthi unabangani nezitha zakhe… futhi angakwazi ukumsiza aqoqe incwadi yakhe.
Kuqondiswe futhi kwabhalwa nguSean Nichols Lynch, Iqhwa Elibomvu ukuthatha okuthakazelisayo nokwakha kabusha ama-movie we-vampire romance, isigaba esincane esigqanyisiwe nesivelele sohlobo. Futhi yize kungakabonakali kangako eminyakeni yamuva, imiphumela yemisebenzi yangaphambilini efana naleyo ka-Anne Rice, Buffy iVampire Slayer, the Twilight i-franchise, nokuningi kusazwakala kunganekwane ye-vampire kuze kube namuhla. Ngakho-ke kuyahlekisa kakhulu ukuthi ube nombhali walezo zindaba ezizobanjwa phakathi kwempikiswano nabancanci begazi bangempela nabanonya.
UDennice Cisneros wenza umsebenzi omuhle njengo-Olivia, ikakhulukazi njengoba izinto zanda. Awukwazi ukusiza kodwa uzwelana nesimo sakhe esesabekayo futhi ungakuqonda ukweqa kwakhe ekuqambeni kwe-vamp. Okuphinde kumsize ukuthi abe nobuchule ngokuhamba kwesikhathi lapho ebhekene nento yangempela esesimweni sikaLuka nabanye. Mhlawumbe ujabulile ukuba ne-vampire yangempela ekhaya lakhe kodwa uyabubona ubunzima nobungozi besimo, futhi. Futhi kuLuka, wenza isimilo esihle semfihlakalo somuntu ongaziwa. Uyathandeka, unobungane futhi uhlakaniphile ku-Olivia… lapho engalambile kakhulu. Ukwenza inkhulumomphendvulwano ehlekisa ngokukhethekile lapho efunda indaba yakhe yakamuva futhi enikeza ukuhlaziywa okucacile kwayo nokuthi ezinye izingxenye zamcasula kanjani. Ubudlelwano babo buqhubeka ngokungafani nezindaba eziningi zothando lwe-gothic kepha usabona ukuthi kukhona okuthile okumnyama ngaphansi kobuso.
Futhi kufanele uncome uVernon Wells njengoJulius King, u-Abraham van Helsing we-movie. Kubonisa ukungathandi ama-vampire okwangempela futhi aqanjiwe njengoba ethuka ngobuqili u-Olivia's vampire themed Christmas decor futhi emxwayisa ngokusebenzelana nabancancisi begazi uqobo. Futhi ukuqhubeka nokubeka u-Olivia ekungabazeni ukuthi ngabe isihloko sakhe se-vampire kungenzeka yini ukuthi simenzele iziza ezicashile. Okuyingxenye enkulu yokuthi kungani ngiyithokozele kakhulu le movie, Iqhwa Elibomvu wenza isenzo esihle kakhulu sokugijimisa womabili ukudlala ama-vampire tropes aqonde futhi awahlanze ngezindlela ezingalindelekile. Ngemuva kwakho konke, ngubani ongcono ukubhekana nezimvubu kunomuntu ozama ukwenza umsebenzi wokubhala ngazo? Ngaphandle kwabaphangi, noma ngabe lokhu kunesakhiwo sothando esingaphansi, lindela izinto eziningi ezibomvu lapho ama-vampire adinga ukondla.
Uma usemakethe ye-vamp-rom-com-thriller enezinhlamvu eziningi zothando / ukubamba uhlobo, Iqhwa Elibomvu ukubhuqa okulumayo kuwe.
Iqhwa Elibomvu izobe iqala ukukhonjiswa emhlabeni ePanic Fest 2021 ngoLwesithathu Ephreli 14 futhi izobukeka cishe. I-trailer engezansi.
2021ComedyHorroruvalo festBuyekezaeyayisekhanda lami
UJacob Davison ungumbhali we-horror waseLos Angeles, obambisene naye i-Eye On Horror, nomthandi wazo zonke izinhlobo zezinto. Uqoqa cishe ama-movie amaningi njengoba ewabukile.
I-'Travel of the Dead 'yeNetrailer Yonyusa Iziteki Zezombusazwe
'Iqoqo Lama-Mortuary' I-Blu-Ray Inamathele Embundwini Ngezici Ezikhethekile ze-Ghoulish